Kunyaradza Nekupa Tariro Vakwegura muPortland, kuAustralia
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Baoule Basque Batak (Toba) Bislama Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chol Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish Fon French Galician Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hungarian Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Shona Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Telugu Thai Turkish Ukrainian Valencian Vietnamese Yoruba
Kunyaradza Nekupa Tariro Vakwegura
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Kunyaradza Nekupa Tariro Vakwegura
Vanhu vakwegura muAustralia vari kuramba vachiwedzera sezviri kungoitikawo kune dzimwe nyika. Vamwe vakwegura vanonogara mudzimba dzinochengetwa vakwegura, kwavanobatsirwa nezvavanoda zuva nezuva kusanganisira panyaya dzeutano.
Vanhu vari mudzimba dzinochengeterwa vakwegura vanewo zvimwe zvavanoda kubatsirwa. Dzimwe nguva vanogona kusurukirwa kana kunzwa sevasingabatsiri. Vhiki rega rega, Zvapupu zvaJehovha zvinoshanyira nzvimbo mbiri dzinochengeterwa vakwegura dziri muPortland, taundi riri muVictoria, kuAustralia, zvichivanyaradza nekuvapa tariro.
Mharidzo dzeBhaibheri Dzinokurudzira Vanhu Vanogara Munzvimbo Dzinochengetwa Vakwegura
Zvapupu zvinokurukura nyaya dziri muBhaibheri dzakadai sedzeupenyu hwaJesu nevanhu vanogara munzvimbo idzi. Jason anoti, “Tinoverenga navo nyaya dzacho muBhaibheri, tobva tadzikurukura.” Sezvo vakawanda vaine utano husina kunaka, Zvapupu zvinovakurudzira nekuvapa tariro pavanokurukura navo vimbiso dzaMwari dzekuti kuchange kusisina urwere nerufu.
“Takatanga tichikurukura navo kwemaminitsi 30, asi vakati vanoda kuti tiwedzere,” anodaro Tony chimwe Chapupu cheikoko. “Iye zvino tava kukurukura kweawa, kunyange zvazvo vamwe mbuya vaitoda maawa maviri!” Vamwe vavo havaoni, vamwe vanongogara vakarara uye vamwe havakwanisi kubata zvinhu nemaoko avo. Saka Zvapupu zvinovabatsira kuti vave nezvavanoitawo pakukurukura kwavanenge vachiita.
Zvapupu pazvinoshanya, zvinoimbawo navo nziyo dzekurumbidza Mwari, uye vakwegura vacho vanowanzokumbira kuti tiimbezve dzimwe nziyo. Vamwe sekuru vanonzi John, * vakati: “Tinonakidzwa nenziyo idzi. Dzinoita kuti tizive Mwari uye timuremekedze.” Vamwe mbuya vanonzi Judith havaoni, asi vakabata nemusoro nziyo dzavanofarira!
Zvapupu zvinoda mumwe nemumwe wevakwegura ava. Brian anoti kana pakava neanorwara, Zvapupu zvinomushanyira mukamuri raanogara. “Tinotaura navo kuti tinzwe kuti vari sei. Dzimwe nguva tinozodzoka mumwe musi kuti tione kuti vava kunzwa sei.”
“Mwari Ndiye Akakutumai”
Vakawanda vanogara munzvimbo dzinochengetwa vakwegura vanotenda chaizvo kushanyirwa uku. Vamwe sekuru vanonzi Peter vanoti: “Ndinotononokerwa kuti musi wacho usvike.” Mbuya vaya vanonzi Judith vanoudza vanovachengeta kuti: “Nhasi Chitatu! Ndigadzirirei kuti ndiende kunodzidza Bhaibheri. Handisi kuda kunonoka!”
Vakwegura ava vanonakidzwa nezvavanodzidza, uye zvinovaswededza pedyo naMwari. Pavakadzidza zvimwe zvakadzidziswa naJesu, sekuru vanonzi Robert vakati: “Nyaya iyi ndakanga ndisingamboinzwisisi. Asi iye zvino ndava kuinzwisisa!” Sekuru vanonzi David vakaona kukosha kwekunyengetera uye vanoti: “Zvandibatsira kuti ndiswedere pedyo naMwari uye ndava kumuona semunhu chaiye.”
Vanambuya nanasekuru ava vanofara chaizvo pavanodzidza nezvetariro iri muBhaibheri yeramangwana. Vamwe mbuya vanonzi Lynette vakaudza Zvapupu kuti, “Tinokutendai nekutivigira mashoko anonyaradza ari muBhaibheri.” Mumwewo akati: “Mwari ndiye akakutumai.”
Mbuya vanonzi Margaret vanonakidzwa nekushanyirwa kwavanoitwa zvekuti vava kutopinda misangano yese yeZvapupu zvaJehovha paImba yeUmambo. Kupinda misangano kwacho hakusi nyore nemhaka yeutano hwavo. Vakaudza Zvapupu kuti: “Makatipa chimwe chinhu chekuraramira.”
‘Muri Kuita Zvakanaka’
Vanoshanda panzvimbo idzi vanotendawo chaizvo kushanya kunoita Zvapupu. Chimwe Chapupu cheko chinonzi Anna chinoti: “Vashandi vanokurudzira vanambuya nanasekuru vanogara ipapo kuti vauye kuzonzwa zvinokurukurwa nekuti zvinoita kuti vafare.” Brian, uyo ambotaurwa nezvake, anowedzera kuti: “Vashandi vacho vakasununguka uye vanoshandika navo. Vanoita zvese zvavanogona kuti vabatsire.”
Mhuri dzevakwegura ava dziri kufara zvikuru dzichiona kunakidzwa kuri kuita hama dzavo nekudzidza Bhaibheri. Mumwe mukadzi akarumbidza zviri kuitwa neZvapupu achiti: “Muri kuitira mhamha vangu zvakanaka.”
^ ndima 7 Mazita evakwegura ava akachinjwa.
Kubatsira Vapoteri muCentral Europe